Zuva rekutanga remakirasi | BLI Zvikoro zveMitauro muCanada
Tikugashirei BLIZuva Rako Rokutanga
Tiri kutarisira kukugamuchiraZuva rako rekutanga remakirasi
Pazuva rako rekutanga rechikoro, vashandi vedu vane hushamwari uye vane ruzivo vanokugamuchira kana iwe uchisvika. Pachave neyekudzidzira musangano wevadzidzi vese vatsva kuti vazive maitiro edu echikoro. Pakati pechirongwa, isu tichakupawo sumo nezveguta, ruzivo rwekugara pamwe nezviitiko zvabva chikoro. Iwe unogashira yakarongedzwa ruzivo ruzivo kit kuti ikubatsire iwe kuti unzwisise zvese zvese zvine chekuita nechikoro uye ruzivo rwese rwakakosha nezveguta.
Isu tinotora mufananidzo wako uye tinokupa iwe kushanyira kwechikoro uye zvakapoteredza kukubatsira kuti uzive nharaunda itsva.
Isu tinonzwisisa kuti iwe waizonzwa kutya nezuva rekutanga, asi zorora uine chokwadi chekuti vashandi vedu vekutarisira uye vadzidzisi vachakufambisa munguva ino yekuchinja. Rangarira kuti tichagara tiripo kuti tikuchengete uye upindure mibvunzo yako yose.
Uku ndiko kuongorora kwakawanda nezve izvo zvichaitika mukati mezuva rako rekutanga:
Oral kuiswa bvunzo
Kufamba kushanya kwenzvimbo yakapoterera chikoro
Ronga hurukuro uye kutenga mabhuku
Mufananidzo wekutora yechikoro ID